भाञ्जीको जालमा यसरी फसे सेनाका सहायक रथी - HKNepal.com - First Nepali Internet Magazine Hong Kong | एचकेनेपाल डट कम
भाञ्जीको जालमा यसरी फसे सेनाका सहायक रथी
प्रहरीका लागि हिनामिना भएको रकम पनि खोज्नुपर्ने चुनौती थियो। प्रहरी अनुसन्धानमा लाग्यो। नेक्सस पहिल्याउँदै जाने क्रममा करिब ३३ लाख रूपैयाँ सेनाका सहायक रथी रमेश विष्टको बैंक खातामा भेटियो। प्रहरी चकित खायो। अब प्रहरीको अनुसन्धान सहायक रथी विष्ट र रेग्मीको सम्बन्धमा केन्द्रीत भयो। गज्जब साप्ताहिकमा खबर छ।
कृषि विकास बैंक न्युरोड शाखामा चार करोड ९१ लाख रुपैयाँ हिनामिना भएपछि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो(सिआइबी)ले अनुसन्धान गरेको थियो । अनुसन्धानपछि शाखाकी सहायक ट्रेलर नागार्जुन–१ की ३२ वर्षीया दीपिका रेग्मी घटनाकी मुख्य योजनाकारका रूपमा सिआइबीले पक्राउ गरेको थियो । हिनामिना भएको रकम खोज्दै जाने क्रममा ट्रेलर रेग्मीले सेनाका सहायक रथी डा. विष्टबारे बताएकी थिइन्।
त्यसपछि सिआइबीले डा. विष्टमाथि अनुसन्धान केन्द्रित गरेको थियो । अनुसन्धानका क्रममा हिनामिना गरिएको मध्ये करिब ३३ लाख रुपैयाँ डा. विष्टको बैंक खातामा भेटिएपछि सिआइबीले आवश्यक कारबाहीका लागि सेनालाई पत्र काटेको थियो । सोही क्रममा सेनाले डा. विष्टलाई हिरासतमा लिई इन्क्वायरी थालेको हो । डा. विष्ट प्राविधिकतर्फका सहायक रथी हुन्।
प्रहरीका अनुसार सहायक रथी डा. विष्टलाई घटनाकी मुख्य योजनाकार रेग्मी ‘मामा’ भन्ने गर्छिन् । प्रहरी स्रोतले भन्यो, ‘डा. विष्ट र रेग्मीबीच कनेक्सन देखिएपछि प्रहरी अनुसन्धानमा जुट्यो । खोज्दै जाने क्रममा रेग्मीले डा. विष्टलाई ‘मामा’ भन्दिरहिछिन् । उनीहरूबीचको सम्बन्ध वास्तविक हो या कृतिम त्यससम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदै छ।’
प्रहरीले घटनामा संलग्न काठमाडौं–३२ का ४७ वर्षीय प्रेमहरि ढुंगेल, टोखा–८ का ५६ वर्षीय गोपाल गिरी, चन्द्रागिरि–५ का ३९ वर्षीय महेश्वर मरहठ्ठा, काठमाडौं–१६ का ४२ वर्षीय प्रकाश घतानी र काठमाडौं–३२ का ४२ वर्षीय रमेशकुमार थापालाई पक्राउ गरिसकेको छ । प्रहरीका अनुसार उनीहरूले विभिन्न बैंक तथा व्यक्तिबाट चेकमार्फत जम्मा गरिएको रकम पेन्डिङ देखाई आपसमा बाँडेका थिए।